Kwiminyaka engama-90 kunye no-zero kwakwanele ukubeka i-lace ukuba ibonakale phambi kwendoda ebulalayo okanye i-princess air - ezinye iindlela azikhethiweyo. Isiqingatha seminyaka emininzi ixesha elide lokwenza imfashini: iimpahla zanamhlanje ezivulekileyo ziye zaba neenjongo kwaye zifuna. Indlela yokugqoka ilayi ukuze ungabanjwa? AmaStlisti anika izicombululo ezintathu.
I-Lace - ihlobo lehlobo-2017
Imihlobiso enesitalathisi kunye neefowuni - eyona ndlela ikhethekileyo kubalandeli besitayela esihle. Umyalelo wokuqala womfazi wefestile - "ngaphantsi, ekulungile" - usebenza kweli phepha ngaphandle kokusilela. Ukuba awukwazi ngokuqinisekileyo ukuba "ulungele" ilayiti emfanekisweni wemihla ngemihla - banike indima yobumnene. Izigqoko, iipopu kunye neenqwelo ezivulekileyo kunye nokufakelwa kwe-guipure, iingxowa, imihlobiso kunye neenqanawa ezihlotshiswe ngama-patterned appliques yindlela efanelekileyo yokubonisa intle.
Ukugqama kwelayiti - ingcaciso efanelekileyo yempahla
I-Lacy phezulu + imimiselo eqinile - iklasi ye-smart cuebal yangoku. Izitayela ze-Laconic zeebhulukhwe zebhulukhwe ze-classic, ijeketi elide okanye i-cardigan iyakunqanda ubulili be-fishnet obuqhenqileyo. Utshintsho olutshisayo "olushushu" - isityalo esinqabileyo-i-shirt, iseshini kwisitayela seselinen okanye i-blouse eneempembelelo ezivulekile. Ingubo enjalo ayifuni iifowuni ezongezelelweyo okanye iinkcukacha ezithintekayo - izibambo azibekezeli ukulwa.
Ikhowudi yokugqoka yeLacy - kwintombazana ehlanjululweyo
Iingubo ezivulekileyo - ukufumana amantombazana abakhetha imifanekiso engaqhelekanga. Ngalesi sihlandlo, i-shades ephakamileyo kwintlanzi yokuthandwa: khetha i-lace ebomvu, iwayini, ebomvu. I-pastel palette isayithanda: i-shades yeuda, i-aiwory, i-ecru, i-milky rose-into efunekayo ukushisa kwehlobo. Khetha i-minimalist top kunye nezixhobo ze-monochrome kwi-skirt ekhethiweyo-ngoko umfanekiso uya kubonakala uphelele.
Nento yokudibanisa ingubo ye-lacy: imizekelo yeeblogi zefestile
Inkosi yakhe i-Turtleneck: imifanekiso emithathu yemfashini ebusika-2017
Ngaphandle: Imithetho ephezulu ye-fashion 3 eye yalahlekelwa yimpumelelo
Yintoni enokugqoka kulo nyaka omtsha
Iindlela ezintsha kwiifashthi zehlabathi, iiprojekthi
Yintoni enokukunika umama omtsha ka-2017 nobaba, intombi ethandekayo okanye intombi, umkhwekazi, intombi, ootitshala. Iimbono ezilungileyo kakhulu zoMnyaka omtsha izipho kubazali, entsapho, amadoda
Ukunyamekela imilenze yamabhinqa, ukukhusela i-varicose folk recipes
Inyama yenkomo yenkomo ngesimo se-steak. Ukupheka kunye namacebiso okupheka
Kunzima kangakanani ukuba ngumlindi wendiza!
Ukuthengwa kwezityalo zangaphakathi
Ice cream i-Ningkin Joy
Izandla kunye nezandla
Inyama ngesiFrentshi kwi-oven - iindlela eziphambili zokupheka
Imihlobiso yamazinyo: iintlobo kunye nokunakekelwa kwamazinyo
I-carrot puree ne-cumin
Iibhokile zeTokotle nge-bhotela ye-peanut kunye namantongomane
Isitya esilula sokupheka kwekhaya elisebenzayo - iipencake ezenziwe ngefriji ye-rye, zokupheka kunye neefoto
Ukuba umlingani wabonakala endleleni